स्वास्थ्य पेजपारि ओमिक्रोन, वारी त्राससँगै सजगता पनि ! - स्वास्थ्य पेज पारि ओमिक्रोन, वारी त्राससँगै सजगता पनि ! - स्वास्थ्य पेज
पारि ओमिक्रोन, वारी त्राससँगै सजगता पनि !
नेपालगन्जः कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका संक्रमितहरु नेपालमा पनि देखिन थालेका छन् । विशेषगरी भारतसँग जोडिएका नेपालका सीमावर्ति जिल्लामा यसको जोखिम देखिएको भन्दै सजगता अपनाउन थालिएको छ ।
दुई वर्ष अघि कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेको नरैनापुरका स्थानीयबासी पनि अहिले निकै सचेत देखिएका छन् । यही सचेतनाका कारण नरैनापुरमा कोरोनाका संक्रमितहरु देखिएका छैनन् ।
मास्क लगाउने, सरसफाईमा ध्यान दिने र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेजस्ता सजगता अपनाइएको स्थानीय राजेन्द्रप्रसाद पाठकले बताउनुभयो । नरैनापुरमा कोरोना महामारीबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णरुपमा पालना हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
भाइरस संक्रमण नदेखिएपनि जोखिम भने कायमै रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरैनापुरका डा सूर्यप्रकाश साहले बताउनुभयो । दैनिक १० हजार मानिसहरु आउजाउ गर्ने नेपालगन्जको जमुनाह नाकामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखिएको छ ।
पछिल्लो पटक नेपालगन्ज नाकामा ६६ हजार व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक हजार पाँच सय जना पोजेटिभ देखिएका छन् । यसले संक्रमण दरमा कमी आएको देखिएपनि जोखिम भने कायमै रहेको देखिन्छ ।